Izindawo ezihamba phambili ze-Anime 2020 - Buka ikhwalithi ye-HD - Ezokuzijabulisa
Ingabe ungumlandeli wokugqwayiza? Futhi uma ufuna amasayithi wokusakaza ama-Anime angcono kakhulu ukukusiza ukuthi usakaze ama-movie wakho owathandayo, khona-ke silapha ukuzokusiza.
Kunezindawo eziningana ze-anime, futhi lokho kwenza kudideke kakhulu ukukhetha noma yikuphi ukusakaza. Ngakho-ke, isikhathi esiningi samahhala ophuma ngaso empilweni enesiphithiphithi siya ezingxabanweni zokufuna iwebhusayithi ehamba phambili.
Kepha manje ungakhathazeki nganoma yikuphi ukungcola ngesikhathi sakho samahhala nesimnandi njengoba siqoqe amasayithi wokusakaza we-Anime abukwa kakhulu lapha. Akudingeki nokuthi uhambe uyozama konke njengoba i-athikili izofaka lonke ulwazi ongathanda ukufanisa izidingo zakho.
Sibhale amawebhusayithi aphezulu we-8 ukubuka ama-movie wakho owathandayo we-animated ngekhwalithi ebonakalayo ebonakalayo.
Uhlu lwamasayithi wokusakaza amahle kakhulu we-Anime:
1. Cat igama ukusakaza indawo
Igama lekati ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zokubuka ama-movie we-animated. Iza nazo zonke izinhlobo zamafilimu opopayi kufaka phakathi ukwethuka, amahlaya, inganekwane yesayensi nezinhlobo zezenzo.Inezici zemibhalo engezansi yesiNgisi ezokwenza ababukeli baqonde kangcono. Into enhle ngaleli sayithi ukuthi inekhwalithi enhle kakhulu yokubukwayo ekhuphukela ku-1080 p.Kukusiza ukwazi bukela bukhoma noma landa ama-movie . Ukwenza i-akhawunti akubalulekile ekusakazeni noma iyiphi i-movie.
I-Kissanime ikusiza ukuthi ubuke ama-movie wakho owathandayo we-animated ngokukhululeka okukhulu njengoba inikeza ikhwalithi ebonakalayo ebonakalayo, imibhalo engezansi yesiNgisi, futhi okubaluleke kakhulu, inketho yokulanda.Yize kungaphoqelekile ukuthi ubhalise kuleli sayithi ukuze ubukele, ukwenza i-akhawunti kungakusiza ukuthi ugcine ama-movie neziqephu zakho ozithandayo. Ngakho-ke, sincoma ukuthi ukwenze.
Isivinini sokulayisha esisheshayo.
Ikhwalithi yokubuka ephezulu.
Akuhambisani nawo wonke amadivayisi.
I-AnimeDao futhi ingelinye lamasayithi athandwa kakhulu futhi asebenza kahle phakathi kwezindawo ezingcono kakhulu zokusakazwa kwe-Anime. Inamaphakeji we-jumbo asiza ababukeli ngejubane lokulayisha ngokushesha, ikhwalithi ephezulu yokubuka ekhuphukela ku-1080p.Inama-movie akamuva futhi nawo amadala kakhulu. Okuthakazelisa kakhulu, kukusiza ngesiNgisi esaziwa ngokuthi futhi amabhayisikobho afakiwe . Ngenkathi usebenzisa le sayithi, ungazizwa waneliseke kakhulu futhi unethezekile ngenkathi usakaza uma uqhathanisa namanye amasayithi.
Ikhwalithi ephezulu yokubukwayo, anhlobonhlobo yezinguqulo zakamuva nezindala zama-movie, kanye nesici esingeziwe sama-movie aqanjiwe futhi asetshenzisiwe senza ama-Anime enze enye yamafilimu okusakaza aphezulu we-Anime.Ngakho-ke, sincoma ukuthi uyenzele ngoba izokusiza ekubukeni okushelelayo.
Isici esingeziwe samatimu akhanyayo namnyama.
Isebenzisa umkhawulokudonsa ophansi kakhulu.
Ukuntuleka kokusakaza ungaxhunyiwe ku-inthanethi.
3. Isiza Sokusakaza se-Anime-Planet
I-Anime-planet ingelinye lamasayithi wokusakaza athandwa kakhulu phakathi kochungechunge lwe-Anime. Inomtapo wolwazi weziqephu ezingama-45000 oheha abasebenzisi emhlabeni wonke.Isakaza izinhlobo eziningana kufaka phakathi amahlaya, ama-adventures, ne- ukwethuka izigaba. Inekhwalithi ebonakalayo enhle kakhulu eyenza ukusakaza kwakho kube bushelelezi kakhulu.
Iphinde isize ababukeli ngezibuyekezo ngabalandeli bama-movie ahlukene ukuze ukwazi ukukhetha kalula noma iyiphi i-movie ongazizwa ifanele ukuyibuka.Leli sayithi lingaba wusizo kuwe uma ungaqiniseki ngalokho okufanele ubuke ngokulandelayo njengoba likukhombisa izibuyekezo zama-movie ahlukile. Ibuye ikunikeze imininingwane mayelana nama-movie athandwa kakhulu noma ongathandwa.
Ikhwalithi yayo ephezulu yokubuka nemisindo izokusiza ukuthi uzwe anhlobonhlobo ama-movie ngenduduzo enkulu nenjabulo.
Ukuhambisana namadivayisi amaningi.
Izikhangiso ezingaphansi kwamanye amasayithi.
4. Isiza Sokusakaza se-AnimeHeaven
I-Animeheaven ingesinye isayithi esisohlwini oluphezulu phakathi kwamasayithi we-Anime wokunikezwa esinakho kubathandi bokusakaza be-anime.Inikeza abalandeli uhla olubanzi lwezinguqulo ezindala nezakamuva zama-movie we-anime ahlukile. Onke ama-movie angaqanjwa futhi agqitshwe ngokusho kwesidingo sombukeli.
Inokubukwa kwekhwalithi ephezulu, futhi ikhwalithi yomsindo nayo iyazuzisa. Inezinhlobo eziningi ezifana namahlaya, isenzo, ama-adventures, ne-thriller.Le sayithi yokusakaza izakhele udumo ngokuhlinzekwa ebikunikeza abasebenzisi bayo isikhathi eside. Inakho cishe konke okungafunwa ngumthandi we-anime noma akufune.
Inketho yokuqanjwa kabusha ne-subbed iyabambeka kakhulu.
Izigaba kulula ukufinyelela kuzo.
Uhla olubanzi lwama-movie.
Ukuntuleka kweziqephu zakudala.
Ama-movie wakamuva atholakala sekwedlule isikhathi.
5. Isiza sokusakaza seContv.com
Konke kusephakeji elilodwa elizokunikeza ama-movie wakho we-anime owathandayo kukhwalithi ebonakalayo ebonakalayo nomsindo.Iqukethe izinhlobo eziningana, kufaka phakathi ezothando nezamahlaya. Amahlaya nawo ayingxenye ebalulekile yalesi siza. Ngokubhekabheka le sayithi, ungabuka imibukiso yakho oyithandayo imini nobusuku, kufaka phakathi uchungechunge lwe-tv.
Leli sayithi lisiza ngezigaba eziningana ze-anime, kufaka phakathi amahlaya, uchungechunge lwe-tv, nama-movie. Kufanele uzame okungenani kanye uma ungumthandi we-anime.Kuzokusiza ukuthi uthole i-Anime oyikhonzile noma ungakwazi ukuyithola kunoma iyiphi enye indawo okwamanje.
Ukutholakala kwamanoveli wezithombe.
Ukuqoqwa okubanzi kwezingane.
Okuqukethwe okulinganiselwe kunguqulo yayo yamahhala.
6. I-Asian Crush
Lapha sikutholile okumangazayo kwakho. Lesi siza esisakazwayo sinikezelwe ikakhulukazi kuma-movie we-anime wase-Asia, ikakhulukazi ubuciko be-karate base-Chinese ne-Japanese Anime.Iphinde ikubuyekeze ngemboni ye-anime yase-Asia, ethuthukisa intshisekelo yakho kakhulu, futhi uyijabulela kakhulu i-Anime.
Ubuciko bokulwa bube uhlobo olujabulisayo emhlabeni we-Anime. Futhi i-anime crush isiza ababukeli ukuthi babanikeze ama-movie angcono kakhulu we-Chinese karate anime movie.Ngaphandle kobuciko bempi, ibhekabheka ezinye izinhlobo futhi ezingakusiza ukuthi ungene emhlabeni wama-Anime Anime ngokuphelele.
Iyahambisana namadivayisi amaningi.
Ukuqoqwa okubanzi kwamaqoqo ase-Asia.
7. Indawo Yokusakaza Yomphefumulo
Ingenye yezingosi zokusakaza ezibalulekile nezithandwayo ze-Anime. Ineziqephu ezingaba ngu-4000 zokuqoqwa kwama-anime.Ungabuka ama-movie we-anime mahhala futhi okubaluleke kakhulu ukuthi anikezela ngeziqephu zakamuva ngesikhathi esingaphansi kwehora ngemuva kokukhishwa kwazo. Lokhu kuyenza idume kakhulu phakathi kwabathandi be-anime.
Uma ungumthandi we-anime, khona-ke iziqephu zakamuva ze-anime kufanele zibe yi-craze yakho. I-Soul anime ikusiza ngokulethwa okusheshayo kweziqephu zakamuva ngemuva kokukhishwa kwazo.Unomsindo ophakeme, nekhwalithi ebonakalayo, futhi iqoqo elibanzi le-Anime unikezwa lona mahhala.
8. Isiza Sokusakaza se-Anmetetake.tv
Lesi ngesokugcina ohlwini lwethu lwamawebhusayithi okusakaza angakusiza ngobubanzi beqoqo lama-Anime.Ungasakaza kalula ama-Anime wamahhala ngaphansi kwezinhlobo ezahlukahlukene ngekhwalithi ephezulu yomsindo nekhwalithi yokubuka ngaphandle kwenkinga kuleli sayithi.
Kufanele uye kulokhu. Ayinazinkinga futhi ineqoqo elibanzi le-Anime. Ungathola isikhathi esincane samahhala futhi usize ukuzijabulisa kwakho ngokuzijabulisa okushelelayo kokusakazwa kwe-anime.
Kunezikhangiso eziningi kakhulu
Zonke izingosi zokusakaza ze-anime ezishiwo ngenhla zisetshenziswa kabanzi emhlabeni wonke. Angamaphakeji we-jumbo wokusakazwa okushelelayo kwama-movie we-anime noma iziqephu.Onke amawebhusayithi ahlangana ukukusiza ngazo zonke izinhlobo zezinhlobo, izigaba, nezinhlobo zama-Anime kufaka phakathi ubuciko bokulwa, Izinhlelo ze-TV , amanoveli wokuqhafaza, namahlaya.
Sithemba ukukusiza ekutholeni isayithi lakho lokusakaza eliyintandokazi impilo yakho yonke.Iba nama-popcorn amahle kakhulu amnandi nge-movie yakho ye-anime oyithandayo futhi uyijabulele!
Izindawo ezihamba phambili zokusakazwa kwezemidlalo
Ingabe i-Z Nation Season 6 iza kuNetflix
Iyini i-Net Worth kaDave Grohl ngo-2022?